Zvakaipei hazvo kuti kana une vateveri vako womboinda zvako mumugwagwa uchivaona kuti uone kuti wava navateveri vakawanda zvakadii uye kuti ivo vanofungei nezvako? Imwe nguva unogona kusara uchifunga kuti wakapenga ivo vaimbokutevera vava kuti unopenga. Kuverengera vateveri vako kana riri bhuku zvinoita here mumugwagwa, pasi pomuti kana mupaki zvamo? Kungofungawo ndichifamba zvangu muguta.
Soul Jah Love aka Chibaba Chacho chichitenderera muHarare chichionana vavateveri vacho. Mufananidzo naTinashe Muchuri, muHarare paCopa Cabana, 2015.